Shiinaha LED Xirmada Awoodda Degdegga ah ee Saqafka, Guddi, Soo-saaraha Quwada Korontada, Qeybiye - Shenzhen Dengfeng Power Supply Co., Ltd
48W Hoos Ilaa 24w Qalabka Beddelka Degdegga ah
Noocyada Nalalka ah ee Dib-u-cusboonaysiinta 40W Xidhmooyinka Batroolka Dib-u-buuxin Kara
90W LED Light Power Pack Pack
7w Qalabka Qalabka Beddelka Degdegga ah
40w Qalabka Qalabka Beddelka Degdegga ah
Laydhka 3w ~ 10w Xirmooyinka Awoodda Degdega ah --DF168N
2.LED 8w ~ 25w Xirmooyinka Awoodda Degdegga ah - DF168H
3.LED 26w ~ 36w Xirmooyinka Awoodda Degdega ahâ € ”DF518H
5.LED 55w ~ 90w Xirmooyinka Awoodda Degdega ahâ € ”DF518H100
Xirmooyinka Awoodda Degdegga ah ee LED Max 10Wâ DF ”DF618H
Xirmooyinka Awoodda Degdegga ah ee LED Max 24Wâ DF ”DF628H
Dengfeng Ltd waa shirkad gaar loo leeyahay oo la aasaasay sanadkii 2009, kuna takhasustay qaabeynta iyo soo saarista xirmooyinka kaladuwan ee nalalka nalalka degdega ah oo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo qalab LED ah iyo qalab. Shirkadu waxay xooga saareysaa kor u qaadida wax soo saarkiisa macaamiisha OEM iyo markii loo baahdo Waxay bixisaa shaqaale iyo qalab si ay u fuliyaan shaqada wax ka beddelka, sidaas darteed hubinta in xirmooyinka beddelaadda lagu daro si sax ah iyadoo la raacayo heerarka Yurub, Australia, Ameerika iyo Ingiriiska. Waxaan shaqaaleysiinnaa in ka badan 100 shaqaale maxalli ah waxaanna ku faaneynaa heerkeenna qanacsanaanta gaarsiinta. Inta badan badeecadeena waxaa loo diraa bixinta maalinta xigta, sida caadiga ah amar kasta oo la helo ka hor duhurkii waxaa loo diri doonaa gaarsiinta maalinta xigta, waqtiga lagu qeexay qiimaha dheeraadka ah. Injineerada adeegga khibrada leh ee Dengfeng waxay bixiyaan adeeg xirfad leh oo farsamo ah 'goobta' ah. Qeybaha la soo saaray iyo / ama baakadaha batroolka ee la bixiyay waa kuwo si buuxda loo damaanad qaaday.Marka loo guuriyay warshaddeena dhererkeedu yahay 3300 mitir murabac maanta, macaamiisheennu hadda waxay awood u leeyihiin inay ka faa'iideystaan ​​kororka karti iyo hufnaan ee ay maalgelisay.
Nalalka Gurmadka ee Nalalka
Nalalka xaaladaha degdegga ah ee loo yaqaan 'LED' waa in lagu qalabeeyaa aaladaha xaaladaha degdegga-inverter (inverter). Inverter waa DC (batteri, baytariga kaydinta) oo lagu beddelayo hadda (caadi ahaan 220v50HZ sine ama mowjad laba jibbaaran).
Iftiinka casriyeynta casriyeynta warshadaha waa lama huraan In Pearl River Delta, dhaqaalaha kooxda warshadaha Zhongshan waa mid aad u kala duwan. Sanadkii 2007, waxsoosaarka warshadaha Zhongshan wuxuu xisaabiyay in kabadan wadarta qiimaha waxsoosaarka warshadaha magaalada oo ah 70% kooxo.
Waxyaabaha Laydhka Nalalka Si Aad U Gasho Suuqa Japan
Marka hore, jaangooyooyinka shahaadada nalalka LED-ka Japan Sida laga soo xigtay sahaminta macluumaadka Te, Japan ma jiraan heerar rasmi ah oo nal iftiin LED iftiin iyo shahaado bixin ah. Ururka Soosaarayaasha laambadda korontada ee Japan waxay diyaariyeen jaangooyada warshadaha Japan (JIS) oo loogu......
Qalabka Beddelka Degdegga ah ee loogu talagalay Lw 45w Qalabka Beddelka Degdegga ah
Qalabka Beddelka Degdegga ah ee Led 36w Qalabka Qalabka Beddelka Degdegga ah
Led Emergency Light Price 100w LED Xaaladda Degdega ah